Karenni Student Union, Ban Mai Nai Soi, Ban Nai Soi (2022)
หน้าหลัก > ประเทศไทย > Ban Nai Soi > องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร > Karenni Student Union
Global Youth Assembly Drive, Bangkok., Bangkok
ဒုတိယ မြန်မာနိုင်ငံ‌တော်လွတ်လပ်‌ေရးနှင့် တိုင်းရင်းသားများ အရေး........၊။
၂၀၂၁ ဖေဖော်ဝါလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်၍ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် အတိုင်း တိုင်း၊ အနယ်နယ်မှ CDM လှုပ်ရှားမှု၊ ဆန္ဒထုတ်‌‌ေဖာ်ပြသမှုများနှင့် အခြားသော စစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများ အဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်လာချိန်တွင် ပါတီကြီး လမ်းစဉ်၊ လူမျိုးစုကြီး လမ်းစဉ်များ ပေါ်ပေါ်က်လာသည့်အပေါ် မြန်မာပြည်တွင်း၊ပြည်ပရှိ တိုင်းရင်းသားစုများ မိမိတို့၏ အနာဂတ်အရေးများဖြစ်သည့် ပြည်နယ် အရေး၊ တိုင်း အရေး၊ လူမျိုးစု အ‌ေရး၊ ဘာသာ အရေး၊ ပညာ့ အရေး၊ ကျန်းမာခြင်း အရေး၊ အလုပ်ကိုင် အခွင့်အလမ်း အရေး နှင့် အခြားသော ဌာနေတိုင်းရင်းသားများအတွက် အရေးကြီးသည့် အရေးများကို ယခု အရေးအခင်းတွင် ပေါ်လွင်ထင်ရှားစွာ တင်ပြတောင်းဆိုဖို့ အင်မတန် အရေးကြီးကြောင်း မက်ဆေ့ ပါးလိုပါသည်..........၊။
ယခုလို ပြောဆိုခြင်းသည် လက်ရှိ စစ်အာဏာရှင်တွန်းလှန်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် သွေးခွဲခြင်း လုံးဝမဟုတ်ပါ၊။ လက်ရှိ လူမျိုးစုကြီး၊ ပါတီကြီးတို့၏ လုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် သီးသန့် ခွဲထုတ် တောင်းဆိုခြင်း၊ လုပ်ဆောင်ခြင်း များကိုလည်း ပြောဆိုအား‌‌ေပးခြင်း လုံးဝ မဟုတ်ပါ......၊။
လက်ရှိ ပါတီကြီး၊လူမျိုးစုကြီးများနှင့်အတူတကွ လုပ်ဆောင်နေသည့် လုပ်ငန်းစဉ်‌များတွင် မိမိတို့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ၏ ဖြစ်တည်မှုနှင့် လိုအပ်မှုများကိုလည်း တပြိုင်နက် ကမ္ဘာသိ ထုတ်ဖော်ပြောကြားရန် အကြုံပြုခြင်းသာ ဖြစ်သည်........၊။
၁) စစ်အာဏာရှင်စနစ် အမြှစ်ပြတ် ချေမုန်းရေး၊
၂) ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဉပဒေ ဖျက်သိမ်းရေး၊
၃) မတရားဖမ်းစီးခံရ‌‌ေသာ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များနှင့် အကျဉ်းသားများအားလုံး လွှတ်ပေးရေး၊
၄) စစ်မှန်သော ဖယ်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ စနစ် ပေါ်‌ေပါက်ရေး၊
စသည့် အရေးများကို ပိုမို၍ ထင်ထင်ရှားရှား ကမ္ဘာသိ ကြွေးကြော်ရန် အင်မတန် အရေးကြီးကြောင်း၊။
ဤစာပိုဒ်ကို ဖြန့်ဝေခြင်းဖြင့် တိုင်းရင်းသားအရေး ထမ်းဆောင်ကြစို့ ၊။
Civic Nationalist +-*/
Dear everyone, I am Jena from Asian Trust Translation. Currently, I haveaproject need translate from English into Karenni, If you are interesting please inbox
If the Karen cause is important to you, feel free to show your concern by supporting the first and sole research and documentation center dedicated to this people, the Center for Research on the Karens (C.R.K.).
So please, let’s click on the C.R.K. Page and like it!
This page is to work for Karenni and against discrimination of race, s*x, color and religion in Karenni society.
ကြားကာလပညာရေးလုပ်ငန်းများအား အသိအမှတ်ပြုကြောင်း ကြေညာခြင်း။
The 65th anniversary of KNPP
မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်မဟာမိတ်တပ်မတော် (MNDAA) ဥက္ကဌ ဟောင်းဖြစ်သူ ဦးဖုန်ကြားရှင် ၏ စျာပန အခမ်းအနားသို့ ကရင်နီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် (KNDF) မှ ခေါင်းဆောင်များသည် UWSA, TNLA, KIA, AA နှင့် အခြားသော မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတို့မှ ခေါင်းဆောင်ကြီးများနှင့်တကွ ကိုးကန့် ပြည်သူများနှင့်အတူ လွမ်းသူပန်းခွေချပြီး တက်ရောက်ဂါရဝပြုခဲ့ပါသည်။
29.3.2022 ၊ MONGLA
တောင်ကြီးတွင် ကရင်နီစစ်ဘေးရှောင်ကူညီသူ ပရဟိတလူငယ် ၆ ဦးကို စစ်ကောင်စီ စစ်တပ် နှင့် ပအိုဝ်းပြည်သူ့စစ် PNO ပူးပေါင်း ဖမ်းဆီးနှိပ်စက် နေ
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့နယ်တွင် ကရင်နီပြည် ဒီမောဆိုအနီးတစ်ဝိုက် စစ်ဘေးရှောင်များကို သွားရောက်လှူဒါန်းသည့် ပရဟိတလူငယ်ခြောက်ဦးကို မတ်လ ၂၄ ရက်က အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီက ဖမ်းဆီးသွားကြောင်း ဖမ်းဆီးခံရသူများ၏ မိတ်ဆွေများက ပြောကြားသည်။
ဖမ်းဆီး ခံရသူများမှာ အာယုပါလသွေးလှူရှင် အသင်း ခေါင်းဆောင် ကိုမင်းမင်းထွန်း၊ ကိုဇွဲ၊ မလင်းလက်ခိုင်၊ မထက်ထက်နှင့် လူငယ် ၂ ဦးတို့ ဖြစ်ပြီး စစ်ဘေးရှောင်များကို လှူဒါန်းပြီး ရှမ်းပြည် ဆီဆိုင်အပိုင် နောင်ထော်တွင် ဖမ်းဆီးခံရခြင်းဖြစ်သည်။
အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ များ ပအိုဝ်း ပြည်သူ့စစ် PNO အဖွဲ့သည် ပရဟိတလူငယ် ၆ ဦးကို တောင်ကြီးရှိ စစ်တပ်ထဲသို့ ခေါ်ဆောင်သွားပြီး အမျိုးသား ၃ ဦးကို ရိုက်နှက်နှိပ်စက်နေကြောင်းဖမ်းဆီးခံရသူများ၏ မိသားစုဝင်များ တွေ့ဆုံခွင့်ရရန် ကြိုးပမ်းနေကြကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရှိရသည်။
Enjoy the life of forest and being respect the God of mountain & forest is important.
I am Sorry (Funny Video)
I am Sorry (Funny Video) #[email protected] Union
Karenni Cover Song 2022 [ We are Coming ] - Lu Sic/Klaw Reh (Prod - Chris Chen)
We Are Coming 💪
Karenni Cover Song 2022 [ We are Coming ] - Lu Sic/Klaw Reh (Prod - Chris Chen) We are Coming#cover Vocal : Lu Sic,Klaw RehComposer : Khu MiMusic/Mix : Chris ChenRecord : CM Art ChannelMix : Art Khoe KhuCamera and edit : Art...
Hunting - Life of Forest
Hunting with God of Mountain & Forest 😄
"Life of Forest" & "Natural Sound"
Hunting - Life of Forest Hunting Birth Forest's [email protected] Union
ကရင်နီပြည်နယ်မှာ လူတစ်ရပ်စာလောက်ရှိတဲ့ မပေါက်ကွဲသေးတဲ့ ဗုံးတစ်လုံးကို တူးဖော်ခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန်အထူးကိုယ်စားလှယ် နှင့် KNPP တွေ့
ဧရာဝတီ၊ မတ် ၁၀၊ ၂၀၂၂
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးဆိုင်ရာ အထူး ကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ဆာဆာကာဝါနှင့် ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP) ဥက္ကဋ္ဌ ခူဦးရယ် ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့တို့ မတ်လ ၁၀ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၁၀ နာရီခွဲတွင် ချင်းမိုင်မြို့၌ တွေ့ဆုံနေသည်။
ခူဦးရယ်နှင့်အတူ KNPP အတွင်းရေးမှူး (၂) ဖြစ်သူ ဦးအောင်ဆန်းမြင့်နှင့် ကရင်နီအရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့မှ နယ်နဲပလိုး တို့ တက်ရောက်သည်။
KNPP ၏ အတွင်းရေးမှူး (၁) ဖြစ်သူ ခူးဒယ်နီ ရယ်ကလည်း KNPP အနေနှင့် ဂျပန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား တွေ့ဆုံသွားရန် ရှိသော်လည်း စစ်ကောင်စီ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံမည် မဟုတ်ကြောင်း မတ်လ ၉ ရက်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
၎င်းက “ကျနော်တို့ကတော့ စစ်ကောင်စီဘက်က အဖွဲ့တွေနဲ့ တွေ့ဖို့ အကြောင်းလည်း မရှိဘူး။ နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ တွေ့ဖို့တော့ ရှိတယ်။ ကျနော်တို့တွေ့မှာက နိုင်ငံရေးပြောဖို့ မဟုတ်ဘူး။ လူမှုရေး ကိစ္စပါပဲ။ လူသားချင်း စာနာမှုကိစ္စ၊ စစ်ဘေးရှောင် တွေအရေး အဲဒါတွေ ဆွေးနွေးဖို့ ရှိပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ
ဒီး​မော့ဆိုမြို့နယ်၊ ဒေါငံခါးရှိ အိုမင်းမစွမ်း သီလရှင်ကျောင်း
The Best Teacher for Karenni Students in Camp😁
The Best Teacher #Mupai
ဟိုဖက်ကမ်းကတော့ (၇၅)နှစ်မြောက်စိန်ရတုပြည်ထောင်စုနေ့အထိမ်းအမှတ်အလွတ်တန်းဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ (ကျောက်တလုံးကြီး မြို့)
မိုးဗြဲ ဖယ်ခုံက ဗုံးကြဲသံ သူတို့ကြားပါစေ။
2021 Camping Memo (Lovely Students)
Learn to Live in Forest
2021 Camping Memo (Lovely Students) Learn in Forest Subscribe for more @Karenni Union
Beautiful Kayan Lady, Beautiful Song with Beautiful Voice
Beautiful Kayan Lady, Beautiful Song with Beautiful Voice Subscribe ကူအုံးနော် @Karenni Union
Warrior of People (Karenni-Army) Hunting for Myanmar Terrorist Tamatdaw
Hunting for Myanmar Terrorist Tamatdaw.
Warrior of People (Karenni-Army) Hunting for Myanmar Terrorist Tamatdaw Myanmar Terrorist Tamatdaw must stay away from Karenni land. Video Credit to owner @Karenni Union
Where is Doekita? A Foreigner Gets Mad with Kayan Lady
Foreigner & Kayan Lady Funny Video
Where is Doekita? A Foreigner Gets Mad with Kayan Lady Cast:Darryl HayesEster Shine Nanna#subscribeformore @Karenni Union
Beautiful Karenni traditional in camp
"Keep Karenni Traditional Alive"
Models: Poor Phu and Bu Meh
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်က မီးရှို့သတ်ဖြတ်သွားသော စစ်ရှောင်ပြည်သူအလောင်းများကို ယနေ့ မြှုပ်နှံသဂြိုလ်
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ တပ်မ ၂၂ လက်အောက်ခံ၊ ခမရ ၁၀၈ တပ်ဖွဲ့က ဖရူဆိုမြို့နယ်၊ မိုဆိုကျေးရွာအနီး အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ဖြတ်သွားသော စစ်ရှောင်ပြည်သူအလောင်းများကို ယနေ့ ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီခွဲတွင် မိဘဆွေမျိုးများနှင့် ကရင်နီရဲဘော်များက မြှုပ်နှံသဂြိုလ်ပေးခဲ့ကြသည်။
စစ်ဆေးချက်အရ အလောင်း ၃၃ လောင်းနှင့် ကျိုးပဲ့အပိုင်းအစများကိုပါ တပါတည်း မြှုပ်နှံပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဖရူဆိုမြို့နယ်၊ မိုဆိုကျေးရွာအနီးတွင် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်က ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက် မွန်းလွဲပိုင်း၌ ဒေသခံပြည်သူ ၃၅ ဦး ကို ကြိုးများဖြင့်တုပ်ကာ မော်တော်ယာဉ်များပေါ်တွင် အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက ကျူးလွန်ခဲ့သော စစ်ရာဇဝတ်မှုကြီးကို ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့များ၊ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းများ၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များကပါ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုတ်ချခဲ့ပြီး မင်းအောင်လှိုင်ခေါင်းဆောင်သော အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကို အမြန်ဆုံးအရေးယူပေးရန် တောင်းဆိုထားကြသည်။
I'm gonna anchor my butt here (English Lesson for Refugee)
Englishစာ လေ့လာနေတဲ့ ကရင်နီဒုက္ခသည် ကျောင်းသားလူငယ်များအတွက်..
I'm gonna anchor my butt here (English Lesson for Refugee) English lesson for Karenni refugee students. Special thanks to sara Ei Tha and Love On Mission for this Christmas video gift.Subscribe for [email protected] Stude...
Church opening mass
ကရင်နီ​စစ်ဘေးရှောင် IDP စခန်းတစ်ခုတွင် ဘုရားကျောင်းဆောင်အသစ်ဖွင့်ပွဲ့နှင့်တကွ နံနက်မစ္ဆားတွင် ကိုယ်တော်မြတ်ပင့်ယူနေကြသော ပုံရိပ်။
K-Army Training-Batch 71 - Closing Ceremony (part - 2)
We Are Coming 💪💪
Students briefly re-organized World Teacher Day for their teachers.
Watch more: herehttps://youtu.be/yE2u00-s_OU
Karenni Student Union updated their phone number.
Happy Karenni National Deeku Festival
Filters for IDPs
Donated by Love On Mission
God bless Karenni and pray for Myanmar
At Nai Soi
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်မှ 23 ကြိမ်မြောက် ကယားမိသားစု စုပေါင်းကေထျိုးဘိုး (ခ) တံခွန်တိုင်ပွဲတော် ယနေ့ကျင်းပနေသောပုံရိပ်။
Speech for KnND
Happy 2760 Karenni New Year to you all
Key message from our leaders included the chairman of KNPP.
Speech for KnND Happy 145th KnND Here isagreat speech from our toppest leader.
Feb 1 မတိုင်ခင်ကတည်းက တော်လှန်နေတာပါ
Strike againt military is onging strongly
Nanmakhon township CDM campaign.
To continue to maintain and preserve the collective existence and rights of the Karenni peoples, their culture and traditions, by empowering and supporting the students.
We, the Karenni Students, are against discrimination of race, s*x, color and religion in society. We work to get access to higher education and to preserve human dignity and identity.
1. To cooperate with the Karenni National Education Committee to seek for Karenni students to have access to further studies.
2. To cultivate and upgrade the knowledge of Karenni students in administration to be able to participate in serving Karenni state in all fields now and in the future.
3. To implement the collective goals of the Union by unification of the students’ spirit and strength.
4. To cooperate and exchange ideas with other student groups who have also suffered oppression.
5. To support vulnerable students who are facing difficulties so they may continue their studies.
6. To educate and promote the students’ morality, dignity and national identity.